Atomos dia handefa ny mpanara-maso HDR NEON 17 "sy NEON 24" amin'ny Novambra 2020 | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Atomos dia handefa ny mpanara-maso HDR NEON 17 "sy NEON 24" amin'ny Novambra 2020
Atomos faly manambara fa ny mpanara-maso HDR marina NEON 17 "sy NEON 24" dia hanomboka amin'ny Novambra 2020. Hatramin'ny nanambarana voalohany azy tao Cinegear 2019, Atomos dia natokana hihainoana ireo mpampiasa voalohany sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo tsy mivadika. Noho izany, hatramin'ny nanombohany ny voalohany tamin'ny taona 2019, andiam-panovana maro no nampiharina mba hahazoana antoka fa Atomos dia manome monitor avo lenta avo lenta miaraka amin'ny firaketana izay mandeha am-pilaminana amin'ny seho marobe manomboka amin'ny studio / fanaraha-maso famokarana virtoaly ka hatramin'ny fandefasana loko marina.
Ny andiany NEON dia hanomboka halefa amin'ny habe roa, ny 17 "sy ny 24" hiantohana ny fitomboan'ny filàna fanaraha-maso marina na amin'ny famokarana na amin'ny paositra. Ny fahazoana miditra sy tsy miovaova manerana ny fanaraha-maso dia ahafahan'ny mpihazona tsatokazo sary rehetra manan-danja fa nahazo ny tifitra izy ireo ary mitazona ny fikasana hamorona. Ny habe roa dia mety amin'ny; 17 "ho an'ny Focus Pullers, fitafiana gaffer ary ho mpanara-maso ny famokarana ho an'ny rafi-pitantanana laptop. Ny 24 "dia tonga lafatra ho an'ny vohitra horonantsary, DIT, sinematographer, manome monitor marina sy mora ho an'ny famoahana rindrambaiko NLE sy fanoratana amin'ny alàlan'ny fitaovana I / O an'ny indostria mahazatra. Ny fampandrosoana NEON 31 "sy 55" dia eo am-pikarohana, toy ny Atomos tombano ny hevitry ny mpampiasa indostrialy momba ny fomba ifandraisan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fiovana miova amin'ny famokarana virtoaly sy lavitra.
Azo antoka ny sary
NEON 17 "sy NEON 24" dia manolotra fanaraha-maso SDR / HDR marina sy tsy miova ary manome fampiasa firaketana ho an'ny famerenana fitifirana mora na fanomezana fandefasana vokatra maimaim-poana any amin'ny Apple ProRes na mazoto Dnx hatramin'ny 4k DCI 60p. Mora azo ampitaina ao amin'ny studio, amin'ny fanovana na amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny lavitra workflows ny efijery rehetra dia ampifanarahana amin'ny calibration USB ary azo adika mora foana amin'ny tariby fanamafisam-peo USB sy Xrite i1 Display Pro Plus.
Famirapiratana feno amin'ny lamba mainty sy gamut miloko marevaka
NEON 17 "dia mampiasa tontonana FHD 1920 x 1080 misy, fanodinana fampisehoana 10bit, 4k hatramin'ny HD scaling ary safidy ho an'ny sarintany fampisehoana pixel 1 ka hatramin'ny 1. NEON 24 "dia mampiasa tontonana famahana vahaolana 4k DCI miavaka miaraka amin'ny tsy fivadihana True 10bit ary HD/ 2k hatramin'ny 4k UHD / DCI upscaling izay misoroka ny fomba fampidirana. Ny fampiratiana NEON dia mampiditra ny haitao backlight Full Array Local Dimming (FALD) handefa mainty lalina amin'ny famirapiratan'ny HDR feno sary feno 1000Nits. Ny fitoviana fampiratiana, ny zoro fijerena malalaka 180 degre H / V ary ny tahan'ny Dynamic Contrast 1,000,000: 1 dia manome antsipiriany manerana ny aloka sy ny fampisongadinana mahavariana, mamela ny famirapiratan'ny sarinao hamiratra.
Fantsom-pitantanana tarehimarika misy loko miloko
Ny motera AtomHDR dia manome ny fahafaha-mitantana tsara ny fidiranao ary asehoy ny Gamma / Gamut. Ny maody fanaraha-maso voafantina dia ahafahanao miasa amin'ny sehatr'asa SDR na HDR, izay mifanandrify amin'ny toerana misy ny fakantsary, na ny fenitra fandefasana voafaritra ao anatin'izany ny Rec.709, Rec.2100 HLG na ST.2084 PQ. NEON dia manome loko marina tena izy miaraka amina fandrakofana DCI-P3 miaraka amin'ny Wide color Gamuts, toy ny BT.2020, dia zahan'ny maotera AtomHDR marina mba hanomezana solontena tsy miovaova. Namboarina tamin'ny fanovana, avelao ny fivadihan'ny LOG ho HDR EOTF mba haseho amin'ny NEON na ny fidinana an-dalambe ho an'ny mpanjifa mpanara-maso na hampiasa 3DLUTs ho an'ny SDR, hanaraha-maso miaraka amin'ny fampisehoana LOOK na fanontana hita miharihary.
I / O azo ovaina sy azo havaozina
Ny fototry ny sehatra NEON dia fomba maodely izay manome antoka fa ny I / O an'ny monitor dia sady mora hitazona, manolo ary manavao amin'ny farany tsy mila manala ny tontonana tsy misy komisiona. Ny Master Control Unit (MCU) no atidohan'ny NEON miaraka am-panohanana HDMI 2.0 ho an'ny roa sy ny loop out, izay manome fanohanana ny fampidirana horonantsary amin'ny 4096 x 2160 4k DCI hatramin'ny 60p. Ny firmware MCU dia azo havaozina mora foana ary mamela ny fampidinana sy fitehirizana hatramin'ny 8 x 3D LUT ao amin'ny fitadidiany anatiny na afaka mampiasa HDD na SSD 2.5 "mba hitehirizam-boky tsy voafetra izay azo ampidirina amin'ny NEON amin'ny alàlan'ny AtomOS APP amin'ny iOS. Ny MCU dia manolotra fifandraisana faharoa amin'ny alàlan'ny port Xpansion ary NEON dia ahitana ny AtomX SDI module izay manome 2 x 12G SDI. Ny portable configurable dia mamela ny fidirana hatramin'ny horonan-tsary 4k60p miaraka amin'ny fanohanana miverina mifanentana amin'ny rohy tokana 1.5G / 3G / 6G SDI na ny fahafaha-mifindra eo anelanelan'ny fakantsary A sy B. Ny anaran'ny rakitra dia tohanana ihany koa ho an'ny RED ary ny fakan-tsary Arri dia mamela ny firaketana proxy mora amin'ny kaody miaraka amina kaody sy ny anaran'ny rakitra mifanaraka aminy.
Niorina ao amin'ny NEON dia LE Bluetooth, manome ny fahaiza-miasa amin'ny fandefasana lavitra ny NEON amin'ny alàlan'ny AtomRemote OS avy amin'ny fitaovana Apple iOS mihazakazaka ny andiany 12 na ambony. Mandeha ny fampandrosoana hanitarana ny fifehezana ny NEON amin'ny fitaovana hafa.
Fomba fandraisam-peo sy Playback
Ampifandraiso fakan-tsary na loharanom-pahalalana video amin'ny alàlan'ny SDI, manohana hatramin'ny 4k DCI 60pvia 12G na Dual 6G na fanapahan-kevitra ambany sy taham-bidy amin'ny alalàn'ny 1.5 / 3G SDI miaraka amina fantsom-piraketana audio 12 tafiditra. Ny horonam-peo dia azo lalaovina mora foana ary dinihina tsy mila mandefa haino aman-jery na manala ny fakan-tsary tsy maody firaketana.
HDMI famantarana tsy misy HDCP dia tohanan'ny hatramin'ny 4k60p na HD 120fps miaraka amin'ny fantsom-peo hatramin'ny 8 sy ny fahitana ny angona fampahalalana HDR hifanaraka ho azy amin'ny karazana signal input.
Ny firaketana 10bit 422 dia nalaina tamina Apple ProRes of standard an'ny indostria mazoto DNx Codec mampiasa fisie Scene / Shot / Take na fisie RED / Arri miaraka amina metadata manankarena tafiditra ao anaty fisie izay azo ampiasain'ny rafitra NLE na MAM-nao ho an'ny orkestra fananganana.
Rehefa ao amin'ny fanovana NEON dia natao hifandray amin'ny alàlan'ny HDMI na SDI aminao NLE na rafitra fanabeazana I / O hanomezana fanaraha-maso baseband 10bit dia tsy voakasiky ny mombamomba ny OS na ny ICC hiantohana ny fanaraha-maso marina avy amin'ireo rafitra mitarika rehetra amin'ny SDR sy HDR.
Torolàlana momba ny frame sy ny Anamorphic De-press
Ireo torolàlana momba ny haino aman-jery miaraka amin'ny safidin'ny faritra EBU R5 Graphic sy Action azo antoka azo alefa amin'ny fampisehoana an-tserasera. Misy ihany koa ireo torolàlana cinematic ary azo ampiasaina miaraka amin'ny maody anamorphic de-presse miaraka amin'ny fanohanan'ny 2x, 1.5x ary 1.33x hahafahanao mampifanaraka karazana lantiro isan-karazany.
NEON 17 "- 3699 EUR / $ 3999 - Azo alaina amin'ny Novambra 2020
NEON 24 "- 5999 EUR / $ 6499 - Azo alaina amin'ny Novambra 2020
Ho fampiroboroboana ny famerana LIMITED-EDITION NEON 17 "sy NEON 24" dia hatolotra amin'ny tranga sidina HPRC natao ho an'ny mpanjifa.
Azafady mba jereo ato ny horonantsary fampisehoana an'ity singa ity: youtu.be/olXLZU5YXtM
4K atomos HDR Monitor-recorders SDR UHD 2020-11-19
Previous: Telstra dia mandefa ny sehatra Telstra Octagon hanafainganana ny fifanakalozana manerana ny fifanakalozana eraky ny valo
Next: Zixi dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny Google Cloud